Igumbi laseHwangtobang ehotele apho unokubaleka kubomi bemihla ngemihla kwaye uphumle kwindawo enobubele bendalo
Hwanam-myeon, Sangju-si, North Gyeongsang Province, South Korea
Izindlu zaseKorea sinombuki zindwendwe onguOnda
Iza kusetyenziswa nguwe yonke le izindlu zasekorea (emzantsi korea).
UOnda unezimvo eziyi-102 zezinye iindawo.
***Ibandakanya ulwazi olongezelelweyo lomlinganiselo womntu kunye neentsana***
- Iintsana ezingaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala aziqukwanga kwaye azihlawulwa kwinani leendwendwe ezikwa-Airbnb, kodwa lilonke inani leendwendwe ezihlala kulo mhlaba limiselwa kuquka abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala.
- Ukuba inani elipheleleyo labantu, kubandakanywa neentsana ezingaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala, lidlula inani eliqhelekileyo, umahluko kwinani elingaphezulu kufuneka lihlawulwe kwindawo yokusetyenziswa ngokuqhelekileyo.
- Ukuba inani lilonke labahlali, kubandakanywa neentsana, lidlula ubuninzi bokuhlala kwihotele, ukusetyenziswa kunye nokubuyisela imali akunakwenzeka, ngoko nceda ujonge inani eliphezulu leendwendwe.
Le yindawo yokulala apho unokuchitha khona iinkumbulo ezimnandi kunye nosapho lwakho, izithandwa kunye nabahlobo.
Uhlobo lwegumbi elinye (i-ondol 1) + igumbi lokuhlambela eli-1
* Ukuba wenze ugcino ngokuseta ngokuchanekileyo inani labantu kwigumbi, siya kubonelela ngebhedi ngokwenani labantu.
- Ukupaka kuyafumaneka.
*Ukusetyenziswa kweenkonzo ezongezelelweyo/izibonelelo ezincedisayo zinokuthintelwa ngokuxhomekeke kwimiqathango yesayithi ngosuku, njengokuguquguquka kwexabiso kunye nokutshintsha kolungelelwaniso, imozulu/ixesha/ukuqhekeka, njl., ngoko ke nceda wenze ugcino emva kokuqinisekisa. Nceda uqaphele ukuba kunzima ukurhoxisa okanye ukubuyisela imali ngenxa yokutshintsha kwexabiso / ukuguqulwa kohlengahlengiso kunye nokungafumaneki kweenkonzo ezongezelelweyo / izibonelelo ezincedisayo xa usenza ugcino emva kokuqinisekiswa.
- Nceda wenze ugcino emva kokuqinisekisa ukufumaneka kwazo zonke izibonelelo kunye neenkonzo zehotele, ezifana ne-barbecue, i-swimming pool, kunye ne-spa. Ngenxa yemeko ye-corona, akusoloko kusenzeka ukuba kusetyenziswe iindawo zikawonke-wonke kunye nezixhobo ebezikho ngaphambili. Ukuba wenza ugcino ngaphandle kokuqinisekisa, into yokuba awukwazi ukuyisebenzisa ngosuku lokuhlala kwakho ayiyi kuba sisizathu sokubuyiselwa imali.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-102 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Iinkcukacha zoqhagamshelwano zale ndawo ziya kuthunyelwa kwiselula yondwendwe emva kokuba ugcino-ndawo luqinisekisiwe.